Nin Kuuriyada Waqooyi u dhashay oo loo hayay dilka Kim oo lasii daayay - Worldnews.com
Booliiska Malayshiya ayaa sii daayay ninkii kali ahaa ee Kuuriyada Waqooyi u dhashay ee loo hayay dilka Kim Jong-nam.
Saraakiishu waxay sheegeen in la waayay cadday ku filan in dacwad lagu soo oogo Ri Jong Chol, loona masaafurin doono dambiyo dhanka socdaalka ah oo uu galay.
Ku dhawaad saddex todobaad
"in ay aad uga walaacsan tahay"
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay dadka Malayshiya u dhashay ee dalkeeda jooga ay ka mamnuucayso in ay safraan, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda dublamaasiyadeed ee ka...
Amniga meesha lagu keydiyay maydka Kim Jong-nam, oo ka mid ah magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia, ayaa si aad ah loo adkeeyay. Kim ayay isku aabo ahaayeen hogaamiyaha...
Malayshiya oo joojisay heshiiskii dal ku gal la'aanta ee Kuuriyada Waqooyi
Dawladda Malayshiya ayaa soo afjartay hannaankii dadka Kuuriyada Waqooyi u ogolaanayay in ay dal ku gal la'aan u soo safraan dalkooda, sida uu sheegay ra'iisalwasaare ku...
Malayshiya oo u yeertay danjiraheeda dilkii Kim ka dib
Dawladda Malayshiya ayaa u yeertay danjirahoodii Kuuriyada Waqooyi ka dib markii uu ka sii daray muranka ku saabsan dilkii Kim Jong-nam oo ay isku aabo yihiin madaxweynaha...
Labo dumar oo wajahaya dacwado la xiriira dilkii Kim Jong-nam
Laba dumar ah oo looga shakisan yahay dilka Kim Jong-nam, oo isku aabo ay yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Kim Jong-un, ayaa lagu oogayaa dacwad ah "dil bareer ah"....
Afar ruux oo loo raadinayo dilka Kim 'sirdoon bay ahaayeen'
Hay'adda sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa rumaysan in ay basaasiin yihiin afar ruux oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay oo looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin dilkii...
Afar ruux oo loo raadinayo dilka Kim \_'sirdoon bay ahaayeen\_'
Hay'adda sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa rumaysan in ay basaasiin yihiin afar ruux oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay oo looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin dilkii Kim Jong-nam. Hogaamiyha Kuuriyada Waqooyi walaalkii oo ka wayn ayaa lagu sumeeyay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur, sida ay sheegeen booliiska Malayshiya. Todobada ruux ee ay Malayshiya sheegtay in ay ka...
Meydka Kim Jong-nam ayaa la geeyay Pyongyang
Meydka Kim Jong-nam, oo ay walaala yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, ayaa laga dajiyay magaalada Pyongyang, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Shiinaha. Kuuriyada Waqooyi ayaa dalbatay in meydkaasi lagu soo wareejiyo. Jong-nam ayaa si aan macluumaad badan laga haynin ugu geeriyooday magaalada Kuala Lumpur ee dalka Mleeshiya. Booliisku waxay rumaysan yihiin in la...
Waxaa la soo gabogabeeyay baaritaanka maydka Kim Jong-nam oo ay walaalo yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Kim ayaa dhintay Isniintii isaga oo loo malaynayo in la sumeeyay isaga oo doonaya in uu diyaarad ka raaco magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malayshiya. Haweenay ayaa la filayaa in ay Khamiista ka soo muuqato maxkamad, haweenay kale ayaana hadda la xiray sida...
North Korea iyo Malaysia ayaa si isdhaafsi ah kala saaray muwaadiniintooda xayiraad aysan dalalkaas uga bixi karin. Arrintaasi ayaa ka dhalatay khilaaf sii xoogeysanaya oo ka dhashay dilka nin ay isku aabo ahaayeen hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Kim Jong-nam. Iska aargudashada xad dhaafka ah waxay imaaneysaa ka dib markii Kuuriyada Woqooyi ay ka carootay qaabka Malaysia ay u...
Labo dumar ah oo maxkamad loo soo taagay dilka Kim
Labo haween ah oo lagu eedeeyay in ay dileen Kim Jong-nam, oo ay isku aabo yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu soo oogay dilkiisa. Doan Thi Huong oo reer fiitnaam ah iyo Siti Aisyah oo Indunuusiyaan ah ayaa Lagu eedeeyay in ay wajiga ka mariyeen Kim sunta halista ah ee neerfaha waxyeesha ee VX isaga oo 13 Feebaraayo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee...